SPORTS MYANMAR - Page 443 of 549 -
၂လနီးပါး Lockdown ကျခံရတဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေ အတွက် အလိုအပ်ဆုံး အစီအစဉ် တခု ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာတဲ့ #လမ်းပတ်
May 9, 2020 - by Editor
ကမ္ဘာ တလွှား ကို ပြန့်နှံ့ရိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးဆိုးကြီးကြောင့် ဥရောပ ရဲ့ ဘောလုံး လောကကြီး ကလည်း ဘာမှ အသက်ဝင် လှုပ်ရှားမှု မရှိနေတော့ပါဘူး ။ သို့ပေမယ့် နိုင်ငံကြီး တချို့ ကတော့ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ တွေကို ပြန် အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီး ၊ ယခု မေလ နဲ့ လာမယ့် ဇွန်လ …
ဘောလုံး သမိုင်းမှာတော့ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့အခါ မှာ အကြီးကြယ်ဆုံး ကစားသမားတွေ ပေါ်ထွက် ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ခေတ်မှာတော့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ နဲ့ ခရစ်စတီယာနို တို့လို အကြီးကြယ်ဆုံး ကစားသမားတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း မြင်တွေ့ခွင့် ရတာ ကတော့ အလွန် ကံကောင်း လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်း တစ်လျှောက် အကြီးကြယ်ဆုံး ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်တဲ့ …
ဘိုဂျန်ကာကစ်က ဘာစီလိုနာ အသင်း အနေနဲ့ အင်တာမီလန် တိုက်စစ်မှုး လော်တာရိုမာတီနက်စ် ထက်စာရင် လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး ရော်ဘတ်တို ဖာမီနို ကို ခေါ်ယူတာ ပိုမို ကောင်းမွန် လိမ့်မယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။ အင်တာ တိုက်စစ်မှုး မာတီနက်ဟာ ဒီရာသီ စီးရီးအေမှာ အထူး ခြေစွမ်းပြ ကစား နေတာကြောင့် လာမည့် …
အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ ဂန္တဝင် နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး ​က သူဟာ အသင်းရဲ့ ပွဲအတော်များများကို အားပေး ကြည့်ရှု ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ အသင်းအတွက် အများကြီး စိုးရိမ် မိကြောင်း ဝန်ခံ ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ ဂန်းနား တို့ရဲ့ ဂန္တဝင် နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းကို …
ယူနိုက်တက် စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ နောက်ခံလူ ၊ ပြင်သစ်မှာ ဘောလုံး ပြန်ကစားမယ့် ဆစ်ဆီ တို့နဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
နယ်သာလန် နည်းပြကြီး လူးဝစ် ဗန်ဟား က စပါး အသင်း ဥက္ကဌ လီဗိုင်း ဟာ သူ့ကို တွေ့ဆုံ ဖို့ အတွက် ကား နောက်ဖုံး ထဲ မှာ ပုန်းအောင်းပြီး ( မီဒီယာတွေ ကို ရှောင်ရှား ဖို့ ) လိုက်ပါ ခဲ့ဖူး တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ …
ယာနူဇက်လို မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားမှာ မဟုတ်တဲ့ ယူနိုက်တက် ကြယ်ပွင့် အမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က အကယ်ဒမီ ထွက် လူငယ် တိုက်စစ် ကစားသမား လေး ဖြစ်တဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် ကို စစ်မှန်တဲ့ စတား ကစားသမားလို့ ချီးကျူး လိုက်ပြီး ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား …
ဒီရာသီ သူ့အတွက် ရင်ဆိုင်ရ အခက်ခဲဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဘက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရောဘတ်ဆန်
လီဗာပူး အသင်းဟာ ပထမဦးစားပေး ဘယ်နောက်ခံလူ ဖြစ်လာ ကတည်းက ပြိုင်ဘက် တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တော်တော်များများဟာ အန်ဒရူး ရောဘတ်ဆန် ထက် ပိုကောင်းအောင် ကစား နိုင်ခဲ့တာ သိပ်ပြီး မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း စကော့တလန် အသင်း ခေါင်းဆောင်က သူ့အနေနဲ့ ဒီရာသီမှာ ၀ုဖ် အသင်းရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား …
မက်ဆီ နဲ့ တွဲ ကစားရတော့မယ့် ပီယာနစ် ၊ ကစား သမားတွေ ကို ဖိအားမပေးဘူးဆိုတဲ့ ဆိုးရှားတို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဘွန်ဒစ် လီဂါ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဟာ ကစားပွဲ တွေ ပြန်လည် စတင် ချိန် မှာ ဖရန့်ဖွတ် အသင်း ရဲ့ လာဘ်ကောင် သိမ်းငှက် အပါ အဝင် အခြား ဘယ် တိရိစ္ဆာန် ကိုမှ ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့် ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။ …
မက်ဆီနဲ့ ပက်သက်ပြီး နောင်တရမိတဲ့ အရာတစ်ခုကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ရောဘတ်ဆန်
အန်ဒီရော်ဘတ်ဆန် က ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လီဗာပူး ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် အောင်ပွဲ အတွင်း လီယွန်နယ်မက်ဆီ အပေါ် ပြုမူ ခဲ့တဲ့ အရာ အပေါ် နောင်တ ရမိတယ်လို့ ၀န်ခံ သွားခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ စတား ရဲ့ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးကိုလည်း ချီးကျူး သွားခဲ့ ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ …
နောက်ရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ဟာ အမှတ်ပေးဖလားဆု အတွက် လီဗာပူးကို စိန်ခေါ်နိုင်မလားဆိုတာ ဖြေကြားလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က အသင်းဟောင်း ဟာ နောက် ရာသီ မှာ အမှတ်ပေး ဖလား ဆုကို ဆွတ်ခူး နိုင်ရေး အတွက် ခါးသီး ပြိုင်ဖက် လီဗာပူး အသင်း ကို စိန်ခေါ် နိုင်စွမ်း ရှိနေပြီ …
ချဲလ်ဆီးမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ဘာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ မာတစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဝါရင့် ကွင်းလယ်လူ နီမန်ဂျာ မာတစ် က 2017 ခုနှစ် တုန်းက ချဲလ်ဆီး အသင်း မှ ထွက်ခွာ ခဲ့ခြင်း က မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အခုလို ဆုံးဖြတ် …